Ogige Ime Mmụọ nke Cassadaga - WRSP
MGBE AKWIRKWỌ CASSADAGA SPIRITUAL CAMP
1848 (Jenụwarị 6): A mụrụ George P. Colby.
1875: George Colby kwagara Florida.
1893: National Spiritualist Association (nke bụ National Spiritualist Association of Churches) guzobere.
1893 (Jenụwarị): George Colby kwupụtara na Jenụwarị 1893 na National Spiritual and Liberal Association ga-ezute n'oge na-adịghị anya na DeLeon Springs na Volusia County, Florida.
1894: Cassadaga Spiritualist Camp Nzukọ Nzukọ (CSCMA) webatara.
1895: George Colby rụrụ ọrụ ala iri atọ na ise na CSCMA iji mee Ogige Ime Mmụọ.
1895 (February 8): Ndị otu ahụ meghere maka oge mbụ ya na otu narị mmadụ bịara mmemme ụbọchị atọ emere n'ụlọ Colby.
1922: E wuru ụlọ nkwari akụ mbụ Cassadaga na ntọala Association.
1926: Thelọ oriri na ọassụ Cụ mbụ Cassadaga gbara ọkụ. Ntughari malitere n'afọ na-esote ma wuchaa ya na 1928.
1933: Ndị na-elekọta obodo rere Cassadaga Hotel na onye na-abụghị onye otu zụrụ ya.
1933 (July 27): George Colby nwụrụ na Deland, Florida.
1991: Ogige Ime Mmụọ Cassadaga ka edere na National Register of Historic Places.
2019: Ndị 125th ememe ncheta nke ntọala Cassadaga mere.
Cassadaga, Lily Dale, na Camp Chesterfield bụ atọ n'ime ogige ime mmụọ kachasị dị na US (Compton 2019). Ọ bụ ezie na ọnụọgụgụ ka dị nke ogige ndị ọzọ na-arụsi ọrụ ike na United States, dị ka Camp Etna n'ime ime obodo Maine (Yechivi 2019), ọtụtụ n'ime ha emechila ma ọ bụ rụọ ọrụ n'oge (Leonard 2020). Cassadaga (okwu agbụrụ ndị Seneca Indian nke pụtara "nkume dị n'okpuru mmiri"), nke hibere na 1894, bụ ogige ime mmụọ kachasị ochie na South. Aha ụlọ ahụ si na Lake Cassadaga ebe Lily Dale dị. A na-akpọkarị ya "Isi Obodo Isi Uche nke .wa." 2019 akara 125th ncheta [Foto dị n'aka nri] nke ntọala Cassadaga. N'agbanyeghi na ama ama ulo oru a, enwere nani uzo ihe omuma banyere Cassadaga (Ngalaba Na-ahụ Maka Ime Obodo nke United States 1991; Schaleman nd; Leonard 2020, 2017).
George P. Colby, [Foto dị n'aka nri] bụ onye guzobere onye isi nke Cassadaga, ka amụrụ na Jenụwarị 6, 1848 (n'otu afọ ahụ Fox Sisters mere mmụọ mmụọ na Hydesville, New York, nke malitere usoro ime mmụọ nke oge a na okpukpe na-aga n'ihu) nye ndị Baptist James Colby na Elminia (Lewis) Colby na Pike, New York (Colby 2020; Mimna 2017; Leonard 2020). Mgbe Colby dị afọ asatọ, ezinụlọ ahụ kwagara Minnesota. E mere Colby baptizim mgbe ọ dị afọ iri na abụọ. Mgbe ọ dị afọ iri na ụma, o doro anya na Colby malitere ịzụlite ikike ọgụgụ isi ya. N'oge na-adịghị anya ọ bịara mara Mpaghara maka ọgwụgwọ na ikike doro anya. Ọ hapụrụ ụka Baptist na 1867 ma malite njem na ibi ndụ site na ngosipụta nke ikike ya n'oge ọgụgụ na nzuzo na ihu ọha. Ọ na-eleta Lily Dale ugboro ugboro na New York, yana mkpakọrịta ndị ọzọ na ogige. Dị ka okenye, Colby nọgidere na-alụghị di, mana ọ kuchiri ọtụtụ ụmụ nwoke ma kwado agụmakwụkwọ ha. O nwetụrụ ọganihu n'oge ndụ ya, [Foto dị n'aka nri] mana ọ hụkwara ọrịa na-adịte aka na ịda ogbenye ruo na njedebe nke ndụ ya.
Colby kọrọ na mbido mmepe ya dị ka onye na-ajụ ase, ọ natara ozi sitere na mmụọ nwanne nna ya na ọ ga-ehiwe ogige ime mmụọ na South otu ụbọchị. Seneca gwara Colby ka ọ gaa leta TD Giddings na Wisconsin, ha abụọ wee zukọta n'otu Florida iji guzobe ebe ime mmụọ, ebe "Congress of Spirits" ga-ekpebi ebe a. Colby ebidola ịrịa ọrịa ma dọkịta gwara ya ka ọ chọọ ihu igwe na-ekpo ọkụ iji wee nwee nsogbu (Awtry 2014: 44; Karcher na Hutchison 1980: 67).
Colby na ndị otu ya na-eme njem rutere Blue Springs na Volusia County na Nọvemba 1 (Karcher na Hutchinson 1980: 67-68). Ha na-akọ na n'oge mgbede Seneca pụtara n'ihu otu ahụ nwere ọhụụ nke obodo ọdịnihu.
Imirikiti ndị otu ahụ ahụtụbeghị mbụ n'abalị ahụ ngosipụta nke mmụọ mana George Colby, n'ụzọ nkwenye ya, kọwara ihe ịtụnanya ahụ wee nweta ntụkwasị obi nke ndị ibe ya. N'abalị ahụ, Colby nwere nrọ banyere Spiritualism-otu ụbọchị a ga-ahazi ya dị ka okpukpe. Na nrọ ya, ọ hụrụ obere obodo dị na Central Florida bụ nke mejupụtara kpamkpam nke ndị mmụọ - ebe ndị mmadụ ga-esi n'akụkụ niile nke mba ahụ wee mụta ma nweta Mmụọ Nsọ.
Ọ dị mma tupu ịchọta ebe ogige Cassadaga dị, na 1875 Colby amalitelarị ịre ụlọ na Volusia County, nke ọ na-agbaso ruo afọ iri abụọ. N'afọ 1880, Colby gbara akwụkwọ maka nnweta ụlọ ma nye ya traktị 145-acre na 1884. Mgbe enyere ikike maka akwụkwọ nkwado Cassadaga Spiritualist Camp Meeting Association na 1894, ọ rụpụtara ala iri atọ na ise ahụ na mkpakọrịta na 1895. The mkpakọrịta mechara nwee ike inweta acreage ọzọ na-abawanye mpaghara ya ruo acres iri ise na asaa (Leonard 2020).
Na February 8, 1895, Association mmeghe ahụ mere na ndị 100 bịara maka mmemme ụbọchị atọ nke emere n'ụlọ Colby. Ozugbo e guzobere Association ahụ, Colby ghọrọ otu n'ime ndị na-ajụ ase bi na ya. Ka oge na-aga, ahụ ike ya nọgidere na-ada, yana akụnụba ya. Ọ nwụrụ daa ogbenye na July 27, 1933.
Cassadaga kwenyere na echiche ndị dị na nke ime mmụọ (Cassadaga web nd “Onye Anyị Bụ”):
Anyị kwenyere na ọgụgụ isi enweghi ngwụcha.
Anyị kwenyere na ihe ịtụnanya dị n’anụ ahụ, ma nke anụ ahụ ma nke mmụọ, bụ ngosipụta nke ọgụgụ isi enweghi ngwụcha.
Anyị na-ekwenye na nghọta ziri ezi banyere ụdị okwu a na ibi ndụ n'ụzọ kwekọrọ na ya bụ ezi okpukpe.
Anyị na-ekwenye na ịdị adị na njirimara onwe onye nke mmadụ na-aga n'ihu mgbe mgbanwe a na-akpọ ọnwụ.
Anyị na-ekwenye na nkwurịta okwu na ndị a na-akpọ ndị nwụrụ anwụ bụ eziokwu, nke sayensị gosipụtara site na mmụọ nke Spiritualism
Anyị kwenyere na ụkpụrụ omume kachasị elu dị n'ime Goldenkpụrụ Ọma ahụ: "Ihe ọ bụla unu chọrọ ka ndị ọzọ mee gị, meekwa ha ya."
Anyị na-akwado ọrụ omume nke onye ọ bụla, yana na ọ na-eme ka ọ nwee obi ụtọ ma ọ bụ enweghị obi ụtọ ka ọ na-erube isi ma ọ bụ nupụrụ iwu nke anụ ahụ na nke mmụọ.
Anyị na-ekwusi ike na a naghị emechi ọnụ ụzọ mmezigharị megide mkpụrụ obi mmadụ ọ bụla, ebe a ma ọ bụ ndụ.
Anyị na-ekwenye na ụkpụrụ nke Amụma na ọgwụgwọ nke dị na Akwụkwọ Nsọ bụ njirimara Chineke gosipụtara site na Ọkara.
Spiritism na-agbaso nzọrọ ya na sayensị na nkwupụta na ndụ na-aga n'ihu; ya bu, onye obula bu ihe puru iche, nke ebighebi. A na - ahụ nkwado site n'aka ndị na - ajụ ase na - anata ma kesaa ozi sitere na mpaghara mmụọ a na - adịghị ahụ anya. N'otu oge ahụ, Spiritualism bụkwa okpukpe. Ọ na-akụzi na e nwere Chineke, onye bụ ọgụgụ isi na ike na-enweghị ngwụcha nke kere Iwu Okike nke na-achịkwa eluigwe na ala.
Cassadaga kpachara anya ka ọ ghara ikwupụta nkwenye pụrụ iche maka nkwenkwe ya na omume ya, na-achọpụta nke ahụ "Agwọ nke mmụọ anaghị agọnahụ na ndị dibia na ndị dọkịta na-awa ahụ dị mkpa. Anyị kwenyere na ọgwụgwọ ime mmụọ na-eme ka ọdịnala yana ndị dibia bekee ọzọ ma anyị na-akwado ha oge niile. Ọzọkwa, Cassadaga kwetara na ịgwọ onwe onye nwere ike ịbụ akụkụ dị mkpa nke usoro ahụ. The ọkara ọwa “Chineke na-agwọ ọrịa ume” na onye, ​​ọbụna mgbe onye ahụ bụ n'ụzọ anụ ahụ na-anọghị ụfọdụ (Cassadaga website nd “Onye Anyị Bụ”).
ITLỌ / AKW /KWỌ
A na-eduzi ememe ndị dị na Cassadaga site na ndị na-ajụ ase na ndị na-agwọ ọrịa. A na-aghọta onye na-ajụ mmụọ dị ka “onye nwere ike ịnata nkwurịta okwu site n'aka ndị bi na mbụ ma banye na mmụọ mmụọ. Nkwurịta okwu a sitere n'aka ndị mmadụ nwere ike ịbụ ihe a na-eme n'onwe ya ma ọ bụ meghee ma na-abịa n'ụdị nke ịhụ ụzọ, ịnụ ihe, ịnụ ísì na ịma ihe. Onye na-agwọ ọrịa bụ onye na-arụ ọrụ dị ka ụzọ iji nye ndị ọzọ ume ike Chineke, ma maka ọgwụgwọ anụ ahụ, nke mmetụta uche, nke mmụọ ma ọ bụ nke mmụọ. Nke a na-apụta site na ibikwasị aka. ” (Cassadaga website nd “Ọkara na-agwọ ọrịa). Cassadaga mesiri ike na izi ezi nke ndị na-ajụ ase na agwọ ọrịa site na nkwupụta ya na onye ọ bụla ga-opekempe nke afọ anọ 'asambodo usoro (Cassadaga website “Ndepụta nke Ọkara” nd). Na mgbakwunye na ike ime mmụọ nke ndị na-ajụ mmụọ na ndị na-agwọ ọrịa mere, a ghọtara Cassadaga n'onwe ya ịbụ ntụgharị uche nke mmụọ nke mkpokọta nke ọrụ mmụọ na nke ime mmụọ n'ime obodo.
Edepụtara ọtụtụ iri na ndị na-ajụ ase na ndị na-agwọ ọrịa na weebụsaịtị Cassadaga Camp. [Foto dị n'aka nri] Onye ọ bụla na-enye profaịlụ nke akụkọ ntolite onwe ha, asambodo, ọrụ enyere. N'ozuzu, profaịlụ ndị a na-achọpụta usoro ịgwọ ọrịa na ọgwụgwọ ha na ndụ ogologo oge niile nke ime mmụọ na nke mmụọ, ahụmịhe mgbanwe, na ọzụzụ ọkachamara (Lee, Fernandez 2015). Achọrọ ndị niile na-ajụ ọrụ na-arụ ọrụ n'ime ogige ahụ ka ha nwee asambodo, ewezuga ụlọ nkwari akụ Cassadaga nke na-enye ndị na-ajụ ase na ndị na-agwọ ọrịa.
Eziokwu site n'ike sitere n'aka ndị ahịa na-ejupụta eziokwu na ike nke ọgwụgwọ na usoro dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, Williamson (2008), na-akọ
N'otu oge, ya na mmadụ asaa nọ n'ọnụ ụlọ nke ụlọ nsọ mgbe ego malitere ịda site na ikuku. N’oge ozo, mmuo ijide kandụl soro ya na mmadụ ise ndị ọzọ si n’ime ụlọ pụta.
“Ime ụlọ ahụ ajụwo ezigbo oyi ma mezie ka ọ dị ọkụ. Anyị anụkwala olu na mgbidi na ndị mmadụ na-agagharị, "ka o kwuru. Ọ ga-ewe m ogologo oge tupu m kọọ ihe niile magburu onwe ha mere n'ime ụlọ ahụ pụrụ iche. ”
"Ahụla m ụdị ọdịdị nke ectoplasm na tebụl na-esote nke m ma mee ka ha metụ m aka," ka Cassadaga bụ Victor Vogenitz, 54, onye agha narị otu narị narị kwuru.
E nwekwara ọrụ obodo. N'ụtụtụ Sọnde, enwere ọrụ: ọrụ nkuzi nke Spiritualism, ọrụ ọgwụgwọ, na ọrụ ụka (ukwe, ọgwụgwọ ntụgharị uche na-eduzi, nkuzi)
Ọnọdụ iwu iwu nke Cassadaga nke ime mmụọ dị ugbu a bụ "obodo enweghị nchekwa" ọ dị nso na DeLand, Florida (Basu 2020). Ogige ndị dị ugbu a bu ụzọ gbalịsie ike iguzobe obodo nke National Spiritual and Liberal Association haziri na DeLeon Springs dị nso na Jenụwarị 1893. Dr. William Rowley bụ onye e kwuru na ọ malitere saịtị De Leon Springs ma kpọọ ya National Spiritual and Liberal Association (NSALA). George P. Colby ghọrọ Onye isi ala mbụ ya. Ozugbo Ogige ahụ tolitere ihe onwunwe ya, Abbie Pettengill, Marion na Thomas Skidmore, na Emma Huff, "Obodo nke Ìhè" niile dị na New York (nke bụ Nzukọ Lily Dale ugbu a), nọ na nkwekọrịta zuru oke na ọtụtụ ndị otu ahụ ịchọta obu ulo ohuru. Obodo Cassadaga dị nnọọ ka ogige ugwu na a na-akwado otu iri na atọ maka itinye aha na Southern Cassadaga Spiritualist Camp Meeting Association (SCSCMA) dị ka nwanne nwanyị Ogige na ogige ugwu ha (Leonard 2020).
N'akwụkwọ ya, Cassadaga: Ebe Ndi Mmụọ Zutere (2014: 55), Marilyn Awtry mere ka a mara George Colby dị ka onye guzobere ebe ọnọdụ ahụ dị n'ogige ahụ, Cassadaga, ma chọpụta ndị iri na atọ ndị a dịka ndị guzobere "Southern Cassadaga Spiritualist Camp Meeting Association:"
Thomas Skidmore (Lily Dale, New York); Marion Skidmore (Lily Dale, New York); Abby L. Pettengill (Cleveland, Ohio na Lily Dale, New York); Emma J. Huff (Ọdọ Mmiri Helen, Florida na Lily Dale, New York); Frank Bond (Deland, Florida); Harvey W. Richardson (East Aurora, New York); Adailla C. Jewett (Cleveland, Ohio); Jerry Robinson (Ugwu Lookout, Tennessee); Mariette Cuscaden (Tampa, Florida); Soledad B. Sofford (Tarpon Springs, Florida); George W.Liston (Forest City, Florida); George Webster (Ọdọ mmiri Helen, Florida); na Maria H. Webster (Ọdọ Mmiri Helen, Florida).
Agbanyeghị na nzukọ izizi e nwere na De Leon dọtara mmadụ 1,000, ọrụ ahụ mechara daa mgbe onye nchoputa George Rowley enweghị ike iweta ego zuru ezu iji zụta ebe a mara ụlọikwuu. N'oge ahụ George Colby nyere ihe onwunwe ya ka ọ bụrụ ihe ọzọ. Mgbe emechara ogige ahụ, Colby mechara bụrụ onye ọbịa. Ọ fọrọ nke nta ka bọọdụ ndị isi dozigharịrị akwụkwọ iwu ya ka ọ bụrụ na mkpakọrịta a ga-enwe ala na ụlọ niile dị n’etiti ogige ahụ. E nyere ndị bi na ụlọ ọrụ iri iteghete na iteghete na nza, mana nwe ha ga-anọnyere ndị otu a.
Ọhụụ mbụ nke Cassadaga bụ ebe etiti na oyi nke mba maka ndị mmụọ. E nwere oge na okwu dị iche iche yana ihe ndị a na-eme n'èzí. Ogige ahụ nwere ihe dị ka mmadụ 100 n'otu oge ma ọ bụ naanị mmadụ iri na abụọ na-adịgide adịgide. N'agbanyeghị nke ahụ, obodo ahụ dị ka nke abụọ kachasị ukwuu na mba mgbe Lily Dale Community dị na New York. Obodo gbasaa ngwa ngwa n'etiti ngwụsị 1890s na ngwụsị 1920s. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ iri na atọ wuru site na 1915. Ndị obodo gbakwunyere nnukwu ụlọ ndị na-abụghị ebe obibi, dị ka post ọfịs na 1910, Colby Memorial Temple na 1923, na Cassadaga Hotel nke ewughachiri na 1927. N’akụkọ ihe mere eme nke ogige ahụ, n’ezie chọọchị ime mmụọ [Foto dị n’aka nri] nwere, n’ụzọ ihe atụ ma ọ dịkarịa ala, bụrụ ebe etiti obodo dị ka Ogige Ime Mmụọ nke Cassadaga bụ mkpakọrịta dabeere n’okpukpe (Leonard 2020).
Ogige Ime Mmụọ nke Cassadaga ezutewo isi okwu atọ n'oge akụkọ ntolite ya nke metụrụ ndụ ya na mmepe ya: ijigide ikike ịba ụba ego, ịchịkwa nzụlite nke azụmaahịa ndị a na-ejikọtaghị ọnụ na gburugburu ogige ahụ, na ịme ihere na enweghị obi abụọ banyere Spiritualism n'ozuzu ya .
Site na mmalite mmalite nke Cassadaga, enwe nsogbu ego. N'ezie, e guzobere ogige ahụ na mbụ n'ihi atụmatụ George Colby na ịdị njikere ime ala iri atọ na ise nke ala ya iji mepụta ogige ọhụrụ ahụ. Mgbe Ogige ahụ dọtara ọtụtụ ndị na-ajụ ndị ọbịa bi na-adọta ndị ọbịa nke mmụọ, mmasị na Spiritualism jiri nwayọọ nwayọọ belata. Ihe ọzọ dakwasịrị obodo ahụ bụ mbibi nke Cassadaga Hotel site na ọkụ na mbubreyo 1926. [Foto dị n'aka nri] Ọ bụ ezie na e wughachi ụlọ nkwari akụ ahụ site na 1928, ọdịda nke ahịa ahịa na-ada na 1929 na nsogbu ndị 1930 hapụrụ obodo ahụ nnukwu nsogbu ego. Ọ bụ n'oge a ka ndị obodo kpebiri na ọ nweghịzi ike ịkwado ụlọ nkwari akụ Cassadaga, nke dị mkpa n'ịmepụta nleta. N'agbanyeghị arụmụka siri ike, "ndị otu Association ndị lere ụlọ nkwari akụ ahụ anya dị ka ibu. Na 1933, n'ihi enweghị ike ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ ụtụ isi ya ma ọ bụ ụgwọ o ji ndị ahụ jikọtara ya, Njikọ ahụ rere Cassadaga Hotel "[nke otu ndị ọzọ] (Schaleman nd). Ọ bụ ezie na obodo lanarịrị afọ ịda mba ahụ, "Site na mbido Agha Worldwa nke Abụọ mmepe na Cassadaga abịala na njedebe" (Schaleman nd).
Nsogbu yiri ya maka obodo enwekwaghị ike ịchịkwa oke ya. N'adịghị ka ọtụtụ ogige ime mmụọ, nke na-adịkarị na ọnụ ụzọ, obodo ndị a gbara ogige nwere oke akara akara, a na-ejikọ ụlọ ọrụ Cassadaga Spiritualist Camp na-abụghị mkpakọrịta ụlọ, ụlọ, na azụmahịa. [Foto dị n'aka nri] Thelọ na ụlọ ọrụ ndị ejikọtara ya na ogige ahụ n'ụzọ doro anya na-egosi nke ọma, mana njikọta ahụ na-eme ka ọha mmadụ mara nke ọma maka ndị na-abụghị ndị bi na (Leonard 2020).
Ọrịre na ọnwụ nke njikwa na Cassadaga Hotel dị oke mkpa n'akụkụ a. Hotellọ nkwari akụ ahụ goro ndị na-ajụ ya ase ma nyekwa ụfọdụ ndị ọrụ ọhụụ aka ka ha rụọ ọrụ na họtel ahụ (Basu 2020). Dị ka Blaogh (2013) kọwara okwu ọdịbendị abụọ a:
Ndị Agers ọhụrụ ahụ na-eji kaadị tarot arapara na Cassadaga Hotel. Otu ịchụpụ bụ nzukọ okpukpe na-ejigide usoro nkwenkwe ọdịnala nke Colby guzobere na 1800s. Nke a apụtaghị na ụlọ nkwari akụ Cassadaga na ndị mmụọ mgbazinye ego ya akwụghị ntụkwasị obi na mmụọ ime mmụọ dịka okpukperechi, mana ha nwere obere ntụsara ahụ. Ya dịka ndị Episcopalians na Katọlik.
Na nzaghachi na esemokwu a, ndị na-ajụ akwụkwọ Cassadaga kwadoro na ha bụ "SCSCMA Certified" (Leonard 2020).
Nsogbu njirimara obodo abụrụla nsogbu site na mmụba nke ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na azụmaahịa dị na mpụga oke ogige ogige acre iri ise na asaa nke Cassadaga. Ka mara ụlọikwuu kwetara na ya na ebe nrụọrụ weebụ (Cassadaga mkpokọta “Onye Anyị Bụ”):
Kemgbe ọtụtụ afọ, ụlọ ahịa na ụlọ ọrụ achụmnta ego amụbawo na Cassadaga gburugburu gburugburu ogige 57-acre. Agbanyeghị na ọtụtụ azụmaahịa a bụ nke ndị nwere otu obi, ha bụ ụlọ ọrụ dị iche iche na ndị na-anaghị elekọta ụlọ.
N'ikpeazụ, enwere nsogbu nke asịrị. Tinyere uto na ewu ewu nke Spiritualism, ulo oru ulo nke ndi nwere obi uto putara ihe bu ndi ojoo site na ndi ozo nke Spiritualism. Ikekwe ikpe kachasị dị ịrịba ama, esemokwu na Boston, Massachusetts na 1896 soro ndị na-ajụ ndị mmụọ na Cassadaga. Dị ka Guthrie (1998) si kwuo
gụnyere ndị ọkachamara abụọ a ma ama na Ogige ahụ - onye na-ahụ maka ihe nnweta OL Concannon na nwunye ya, Edella, onye nyocha usoro ikpo okwu. Ọ bụ ezie na nkọwapụta nke ihe omume ahụ nọgidere na-ese, dị ka otu onye hụrụ ya si kwuo, mgbe Maazị Concannon mere nnọkọ na Boston otu onye so na-ege ntị kpọrọ ya phony.
Ọ bụ ezie na onye ahụ na-ebo ebubo enweghị ihe akaebe nke aghụghọ, ihe omume ahụ nwalere mmekọrịta ya na ndị bi gburugburu ogige ahụ. Agbanyeghị, mmekọrịta ndị bi na mpụga na-adịkarị mma, ndị na-ebipụta akwụkwọ na-achọ ịmata ọdịiche dị n'etiti ndị nduhie na ezigbo ndị mmụọ. Ke kiet ke otu isiokwu bipụtara na Ndekọ Volusia County, dịka ọmụmaatụ, otu onye bi na mpaghara dere (Guthrie 1998):
Anyị nwere nkwanye ùgwù dị ukwuu maka onye nwere ezi obi n'echiche ime mmụọ ya dị ka ọ dị maka ndị nwere obi ụtọ na ịnụ ụtọ nkwenkwe okpukpe ọ bụla ọzọ. N'ihi na igwu wayo na ndị nduhie abanyela na nkuzi nke mmụọ nke mmụọ anaghị enye arụmụka iji katọọ ndị niile na-anụ ụtọ ntụsara ahụ na nkwa ndị ha ji ezi obi na-ahụ na nkuzi ya.
Onye ọzọ dere na "Enwere ọtụtụ ndị kwere ekwe na ezi obi n'okwukwe ahụ," ka o kwuru, "ka atụmatụ [Cassadaga] nwee iwe site na ikpughe aghụghọ dị ka Concannon" (Guthrie 1998). N'aka nke ya obodo Cassadaga zara site na iwusi ụkpụrụ asambodo ya ike ozugbo.
Cassadaga, Lily Dale, na Camp Chesterfield na-aga n'ihu ịbụ ogige atọ ime mmụọ kachasị dị mkpa na US (Compton 2019). Enweela ogologo oge nke mmasị ọha mmadụ na Spiritualism, ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ụka na ọdịnala Ime Mmụọ. Imirikiti ogige ahụ mechiri ma ọ bụ rụọ ọrụ oge mgbe "Golden Age of Spiritualism" (ihe dị ka 1880s-1920s) (Leonard 2020). Ndị lanarịrị nwere ike ịmaliteghachi inwe mmasị mgbe nnukwu agha gachara (e, g, US Civil War, World War I, World War II, na Vietnam War) mgbe enwere mmasị dị ukwuu na ndị nwụrụ anwụ. . Odi ka odi ka echiche mbu banyere ichighari nke ndi mmuo gagh adi ire; kama, ọdịnihu dị ogologo nke ogige ndị kachasị sie ike ga-agbakwasị ụkwụ na njikọta nke ọrụ iguzosi ike n'ihe na mmasị ndị njem.
Foto # 1: Akara na-eme 125th ụbọchị ncheta ntọala nke Cassadaga.
Foto # 2: George P. Colby.
Image # 3: Foto nke onye na-ajụ ase na Cassadaga.
Foto # 4: Ime nke Chọọchị Ime Mmụọ na Cassadaga.
Foto # 5: originallọ nkwari akụ mbụ Cassadaga.
Foto # 6: Ọnụ ụzọ nke obodo Cassadaga.
Awtry, MJ (2014) Cassadaga: Ebe Ndi Mmụọ Zutere. Sanford, FL: Akwụkwọ Shen-Men.
Balogh, Christopher 2013. "N'ime Cassadaga, Isi Uche nke Isi Obodo nke .wa." Vice, January 29. Nweta site na https://www.vice.com/en/article/nn4g87/inside-cassadaga na 20 November 2020.
Basu, Moni. 2020. "Na Searchchọ Mmụọ na Cassadaga: Onye edemede na-emeghe eziokwu nke obodo a dị omimi, ndị na-agwọ ike ya na ike karịrị nke mmadụ." Magazin Flamingo. Nweta site na https://www.flamingomag.com/2020/10/30/in-search-of-spirits-in-cassadaga/ na 20 November 2020.
Weebụsaịtị Cassadaga. nd “Ndepụta nke Ọkara.” Nweta site na https://www.cassadaga.org/mediums.html on 5 December 2020.
Weebụsaịtị Cassadaga. nd “Ọkara na ndị na-agwọ ọrịa.” Nweta site na https://www.cassadaga.org/mediums–healers.htmls na 5 December 2020.
Weebụsaịtị Cassadaga. nd “Onye Anyị Bụ.” Nweta site na https://www.cassadaga.org/who-we-are.html na 5 December 2020.
"Colby, George P. (1848-1933)." Encyclopedia nke Occultism na Parapsychology. . Encyclopedia.com. (Ọktọba 16, 2020). https://www.encyclopedia.com/science/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/colby-george-p-1848-1933
Compton, Natalie. 2019. “Nwere mmasi n’ịga obodo ime mmụọ? Lee ihe ikwesiri ịma. ” Washington Post, October 29, 2019. Nweta site na https://www.washingtonpost.com/travel/2019/10/29/interested-traveling-spiritualist-community-heres-what-you-need-know/ na 20 November 2020.
Fernandez, Alexia 2015. "Nwanyị edepụtara dị ka Ọkara Na Cassadaga Spiritualist Camp." N'ozuzu, April 3. Nweta site na https://www.wuft.org/news/2015/04/03/medium/ na 5 December 2020.
Guthrie, John. 1998. "Mmụọ nke Obi Sweettọ: abmepụta Community Spiritualist na Cassadaga, Florida, 1893-1933." Florida Akụkọ Akụkọ Quarterly 77: 1-38.
Karcher, K. na Hutchison, J. (1980) Wayzọ a na Cassadaga. Sanford, FL: John Hutchison Production (Seminole Obibi).
Leonard, Todd J. 2020 "Ihe omumu nke oge nke Ogige Ime Mmụọ nke Cassadaga: Ihe Mere Eme Ya na nke Ime Mmụọ." Association for the Scientific Study of Religion Ihe Omume 2020: 60-78.
Leonard, Todd J. 2017. “Nzukọ Nzukọ na Ime Mmụọ Ime mmụọ: Akụkọ banyere Ọnọdụ na Ọnọdụ nke Condrụ Ọrụ Ime Mmụọ Ndị Ime Mmụọ na gburugburu America.” Association maka Ọmụmụ Sayensị nke Okpukpe 2017 Ihe Omume: 11-30
Mimna, Robin. 2017. "Ezi Mmụọ nke Cassadaga." Akụkọ Florida, February 27. Nweta site na https://medium.com/florida-history / ihe-omimi-na-mmụọ-nke-cassadaga-8a0058b024b1 na 20 November 2020.
Schaleman, Harry. nd Casadaga: Naanị Ebe Ọkara. Florida Virtual Library. Nweta site na https://journals.flvc.org/flgeog/article/view/78709/76105 na 20 November 2020.
Ngalaba ime ime nke United States, National Park Service. 1991. Akwụkwọ ndekọ aha mba nke ebe akụkọ ihe mere eme: Southern Cassadaga Spiritualist Camp Historic District. Nweta site na https://npgallery.nps.gov/GetAsset/2fc1fca3-b02b-475e-90c1-e321209a1423 na 20 November 2020.
Williamson, Ronald. 2008. “Kemgbe afọ 1923 na Cassadaga, ime ụlọ ebe a na-akpọ Seance Room bụ ebe ha na-akpọku ma na-agwa ndị nwụrụ anwụ okwu.” Akụkọ akụkọ Florida. Nweta site na http://www.floridahistorynetwork.com/in-cassadaga-the-seance-room-is-where-they-talk-to-the-dead.html na 5 December 2020
Williamson, Ronald. 2008. Mpaghara Westus nke Volusia County: Steamboats & Sandhills. Charleston, SC: Akwụkwọ akụkọ ihe mere eme.